Titanium Wiricheya - Ultra Mwenje Furu | Karman Healthcare
Titanium wiricheya mafuremu anodhura.
Titanium mavhiripu inoratidzira yakasununguka propulsion system uye rutsigiro rukuru. Macheya eTitanium zvigadzirwa zvakagadzirwa kuitira kuwanisa zvimwe zvinhu a wiricheya mushandisi angangoda. Titanium furemu ine yakasara mwenje uremu furemu iyo ine zvidiki zvidiki uye inobatsira kuvandudza yepamusoro chikamu kufamba.
Titanium mavhiripu anoshanda mabhureki emacheya, iwo emwenje mwenje iyo inokutendera iwe kumira pane dime. Imwe mwenje mwenje mavhiripu vane titanium mafuremu uye zvikamu. Titanium ine simba rakakwirira kune huremu reshiyo kupfuura chero imwe wiricheya zvinhu, kusanganisira aluminium. Kana Titanium mavhiripu kubva kuTiLite, Quickie zvakagadzirwa mushe, vanogona kuchengetedza simba repuremu uku vachidzikisa huremu hwese.
Kazhinji vashandisi vanotenga Titanium Chairs vari kubatsirika kubva kune izvo zvinhu kuva yakasimba chaizvo uye yakanyanyisa kurema uremu. wiricheya Vagadziri vakagadzira Titanium mavhiripu kuitira kuti uwane yakareruka furemu uye iyo yakatenderedza yakawanda inoshanda chidimbu chemidziyo.
Ultra Chiedza Furemu
Hupenyu hunotarisirwa hweTitanium yakaoma wiricheya yakafanana neyesimbi wiricheya. Titanium zvigaro zvinorema zvakadzikira pane zvakajairwa simbi macheya, zvinoreva kuti iwe unowana mwenje maficha uye kusimba kwechigaro chesimbi zvakare.
Rigid titanium mafuremu achiri kushandiswa zvakanyanya kunyangwe achidhura. Kazhinji ivo vanopihwa kune mumwe munhu nachiremba. Titanium macheya ane akachinjika kumashure ekumashure mavhiri, Ultra mwenje furemu, uye macompact kukura ayo anobatsira kudzikamisa kushushikana kwemuviri pamushandisi kana uchizvifambisa, kunogona zvakare kuwedzera nyore kwekushandisa.
Midziyo yakadai seTitanium, ine yakakwenenzverwa nepamusoro pebvudzi kutsemuka kupfuura aluminium uye kabhoni fiber mafuremu. Macheya eTitanium ane chivakwa chisinga nyore, iwo zvakare epro-michina zvidimbu zvemidziyo.
Titanium mavhiripu inoshambadzirwa sechinhu chemutengo wepamusoro, ivo vanowanzo vashandisi vanoshanda zvakanyanya kupfuura vekupedzisira. Kunyangwe ivo vachikwidziridzwa sechinhu chemutengo wepamusoro, ivo havashambadzirwe sechigaro chakakosha, vanozviita chokwadi chekuti chero mushandisi anogona kutenga mhando iyi wiricheya.
Yakakwirira Simba Kuhuremu
Titanium mavhiripu kazhinji inouya yakaomarara furemu, zvichireva kuti haina kupeta. Zvigaro zveTitanium zvine simba rakasimba, asi zvese zvinoenderana nekuti izvo zvikamu zvakare titanium. Kana chete chidimbu cheiyo wiricheya iyo titanium ndiyo furemu, ipapo chikamu chisina kusimba chechigaro chichava icho zvinhu mune yekumanikidza / kuyera bvunzo.
Macheya eTitanium anotarisirwa kuwedzera kufamba uye kugona. Yese modhi inogadzirwa neTitanium, yakanyorwa senge yepamusoro mhando yerudzi rwe wiricheya. Izvi zvinoreva kuti Titanium mavhiripu zvinodhura chaizvo uye hazvina basa pavhareji wiricheya mushandisi. Ivo vanowanzo kuwanikwa mumitambo yakadai se "WCMX".
Ini Ini Ndinoda Inopindirwa Wekupedzisira End Crossfire Titanium wiricheya?
Unoda titanium wiricheya nekuda kwezvikonzero zvakakosha chete.
Taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve yedu titanium wiricheya.